पार्टी एकता गराएरै छाड्छु : उपाध्यक्ष गौतम « MNTVONLINE.COM
पार्टी एकता गराएरै छाड्छु : उपाध्यक्ष गौतम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकता गराएरै छाड्ने बताएका छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणामा आज नेता गौतमले पार्टी विभाजन हुँदा थुप्रै समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख गरेका हुन् । उनले भने, “पार्टी व्यावहारिक र राजनीतिकरुपमा फुटे पनि कानूनीरुपमा अझै फुटेको छैन, त्यसैले एकीकृत अभियानमा लाग्नुपर्छ ।”
तीन वर्ष पहिले कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुँदा संसारलाई तरङ्गीत बनाएको तर आज फुटको अवस्था सिर्जना हुँदा ज्यादै पीडा महसुस भइरहेको उनको भनाइ थियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार आज विभाजनको अवस्थामा पीडा भोग्नु परेको बताउँदै उनले अब पुनः पार्टीलाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा आफूहरुले पार्टी बनाउन १३ वर्ष सङ्घर्ष गरेको बताउँदै उपाध्यक्ष गौतमले अब जति वर्ष समय खर्च भए पनि मिलाएरै छाड्ने उनले जिकिर गरे ।
नेकपाका शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका नेता दाहालले पार्टीलाई चिराचिरा पार्न खोजेका उनले आरोप लगाए । अहिले नेकपामा भइरहेको विवादका कारण एकथरीका नेता ‘हामी निर्वाचन हुन दिन्नौँ’ र अर्को थरीका नेता ‘हामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएरै छाड्छौँ’, भनेर हिँड्नु उचित नभएको गौतमले तर्क गरे ।
दुई पार्टी मिलेर नेकपा एकृकीत भएपछि गरिएको निर्वाचनमा आफूहरुले ४२ लाख मत प्राप्त गरेको र नेपाली कांग्रेले एकलरुपमा ३० लाख मत प्राप्त गरेको बताउँदै नेता गौतमले अब निर्वाचनमा जाँदा आफूहरुले पराजय हासिल गर्ने विचार राखे ।
जनताको साथ लिएर समाजवादको बाटो निर्माण गर्न आफू लागिपर्ने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली र नेता दाहालका केही नजिकका व्यक्तिबाहेक अरु जनता एकताका पक्षमा रहेका आफूले बुझेको उपाध्यक्ष गौतमले अवधारणा व्यक्त गरे । अब नेकपा जुटाउन नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आउने र आफू पनि यस काम पूर्ण गराउन नथाक्ने उनले बताए ।
आज भोलि नेकपा पार्टीभित्र भएको आरोपप्रत्यारोपका कारण जताततै गालीगलौज र आलोचना मात्रै सुनिने गरेको उनको गुनासो गरे । नेकपा पार्टीभित्र सबै शीर्ष नेतासँगै बसेर एक कप चिया खाने र नमस्कार गर्ने वातावरणसमेत हराइरहेको भनी उपाध्यक्ष गौतमले यस नगर्न अनुरोध गरे ।
एकताको अभियान सफल बनाउन जनताको साथ अति नै आवश्यक रहने बताउँदै उनले सबै जनताले साथ दिने विश्वास लिएको भनाइ राखे । हाल पहिलो पुस्ताका नेता पार्टीमा फुटे पनि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेतालाई एकजुट भएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए ।
उनले पुनः थपे , यदि आउँदो वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन भयो भने नेकपाको भोट नेकपाभित्रै हाल्न सबै कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्दछु ।” आफ्नो भित्री धारणा संसद् पुनःस्थापना होस भन्ने रहेको नेता गौतमले कार्यक्रममा सबैमाझ जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री हटाउन नसक्ने भएपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता : महेश बस्नेत !
भरतपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नसक्ने देखेपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वास
कंगो र गुएनामा इबोलाको संक्रमण, ११ जनाको मृत्यु !
निर्णय दिन ढिलाइ गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको विरोध !
दाङमा ११ वर्षीया बालिका बलात्कृत !
भागरथी हत्या प्रकरणः आरोपित दिनेशमाथि अनुसन्धान गर्ने अन्तिम पटक म्याद थप !
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा !
विप्लव नेकपा र सरकारी टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता, सहमति नजिक !
आलमलाई छुटाउने प्रयासमा छु : सभापति देउवा !